Seenaa Ummata Oromoo Pdf download
Seenaa Jaalalaa - Afaan Oromo Online
Silaa akkan dhungannaa keen addunyaa kana irraa godaanu beekta. An attempt will be remade in a few minutes.
Akka seenaan ibsutti, ummanni Oromoo bulchiinsaaf Sirna Gadaa fayyadamaa ture. Qorattoonni seenaa baayyen gosoonni Oromoo Baale muraasni fiixee-kibbaa Itoophiyaa har'aa keessa waggaa kumaa ol jiraacha akka turan walii galu. Seenaa Ummata Oromoo Gababbinaan Oromoon saba Afrikaa keessa jiraatu, pdf highlighter freeware kan Itoophiyaa keessaa fi haga xiqqoo immoo ummata Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti argamu dha.
Bara kaasees Waraanni Bilisummaa Oromoo Dirree dhihaa, kibbaa fi gidduu galatti bakkoota gara garaatti mooraa isaa saaqqate. Lemmanee koo, yeroo mara qalbiin koo si bira jira.
Afaan oromoo afaan Hawusaafi Arabiiffaati anee sadarkaa sadaffaarraati argama. Oromoon waggaa dheeran duraa jalqabee sirna Gadaatin bulaa ture. From Wikimedia Commons, the free media repository. Alamuddiin malamaltummaan mootummaa Saudi Arabiyaatin hidhame. Anaafi atis yeros wal barre.
Akkasumas waltajjii Gondar keessatti Afaan Oromoo akka dubbatamu taasise. Hiikkaa Gadaa Gadaan waan jecha tokkoon himamuu miti.
Seenaa imala ijoollee Oromoo gurguramanii Itoophiyaa haga Afriikaa Kibbaatti. Bulchituu Menen kan Wollo, kan bara Empress taate. Sababnisaammoo, Abbootii taayitaaf kan barcumaa nutu kaffala. Ummanni Oromoo Afaan Oromoo Oromiffas ni jedhama dubbata. Gabrummaa Gara Giiftummaa.
Bates Oromoon sanyiii duriifi jalqabumaa kaasee naannoo kana jiraachaa turedha, tarii ummattoonni naannoo baha Afrikaa kaan baayyen kan irratti erabamani. Iddoo tokko tokkotti, Oromoonii fi Sumaalen qabeenya uummamaa fi lafa gabbata irratti walitti bu'aa turan. You have entered an incorrect email address! Ilma warra Mooti Hermann Von Puckler tti giiftummaan jiraatte.
Yeroo ammaa Afaan Oromoo qubee Laatiniitin barreeffama. Namuu qabeenya mataa isaa irratti seebaa guutuu qaba.
Nannoo Oromoonni baayyen Musliima ta'anitti ammoo qubeen Arabaa Afaan Oromoo barreessuf fayyadamaa turan. Itoophiyaa keessa gazeexessitonnii dhuunfaa fi miidiyaan bilisaa waan hin jirreef, lakkoofsi namoota hidhamanii kun kana caaluu danda'a jedha.
Seenaa Jaalalaa Oroliyaanaa Daani eeliitiin
Goobanaan Minilik jala galuudhan mootummoota Oromoo baayyee cabsee Itoophiyaa jalatti galche. Haa ta'u malee, Oromoon bulchiinsa Itoophiyaa bara suni keessatti bakka argachuu jalqabde.
Dhumma irrattis ayyaana ijoollee kan tabooree jedhamu hiriyaa orpmoo walin kabaju. Sababa kanaafis Oromoonnii Goobanaa akka gantuutti ilaalu. Akkasumas Bageemidir, Enderases jalatti qoodamuu jalqaban.
Kudha tokkoottis fiigsisa, jedheen yaada. Ummani Oromoo bakka kudha lamatti adda baha. Leemmoo koo, Sii caalaa xinsammu koon geggeeffameen, si dhiisee biyya Ambaa deemee hojjechuf murtesse. Silaas, anatoo jaalalaaf jedhee si Miidhehooti, atii giiftiin jaalalaa, kan yeroo mara jaalala faacaftu, akka taates bareeche beeka. Gumaachi Oromoo Itoophiyaa hundeessuu keessatti yoo ilaallame, Goobana Daaccii waraana geggeessudhaan mootummoota bilisummaan jiraachaa turan Itoophiyaa jalatti galcheera.
Hiiqaan maqaa kana warri gaafatan yoo jiraate, Seena Oromootin Jaalatamtuu jechuu dha. Kuusaa Jechootaa Afaan Oromoo. Oduu Itoophiyaa Viidiyoo Jajjaboo. Sirna barreeffama Qubee Afaan Oromoo kan boce.
Bareedina shamarree kana dinqisiifate yeroo dhuma kanatti akka ishee bitu dirqame. Marcus akka jedhetti kaabi-dhihaa Boorana akka bakki Oromoon duran qubate akka ta'e ibseera. Humnaa fi maatii imperiyaalaa wajjin walitti qabamuf jecha ummatni Oromoo hedduun Kiristaanummaatti jijjiiramanii turan. Kana jechuun gadaan hiika hedduu qaba jechuudha.
Akkasumas, baballinni guddaan Sumaalee lafa diriiraa Ogaadeniirraa gara dhihaatti gara laga Jubaatti godhame Oromoo wajjiniin walitti bu'iinsa fide. Oromoon tooftaa qonnaa aadaa duubatti hafaa ta'e kan hordofu yoo ta'u jireenyi isaanis irra caala harkaa gara afaanitti.
Dhumarratti wanni irra gehan dafanii dirree seenanii qabsoo hidhanoo eegaluu. Oromoon harki caalaan naannoo Oromiyaa keessa kan jiraatan yoo ta'u hangi tokkommoo kaaba Keeniyaa keessa jiraatu. Leemmoo koo, ati Namummaa koo jaallatte malee, homaa tokko akka ati anarra hin feene sirrittan beeka. Akkasumas Begemder, Enderases jalatti qoodamuu jalqaban. Dinagdeeniifi amantaan Uummatichaallee Aadaadhuma sana keessaan calaqqisu.
Ani immoo egaa yeros yeroon haalotakee isa reef natti argamu kana ilaalu, utuman si jaalladhuun, si amanuu dadhaba. Gartokkeen qaama kee ana bira jiru, yoomuu akka nagaa anaaf hin keennines nan amana. Seenaa Gabaabaafi Kitaabota Gaaz.
Oromoon mootummoota ofbulchan muraasas qaba, kanas ummata Sidaamaa wajjin qooddata. Garuu, bu'aan kunis qonnaa waliinii kan dirqamaa, qonnaa mootummaa fi sagantaa ummata dirqamaan qubsiisuurraan kan ka'e galmaa gaa'uu dide. Oromoon ummata afaan hortee Kuush dubbatu kan bahaa fi kaaba baha Afrikaa keessatti argaman keessaa isa guddaadha. Gaanfa Afrikaa keessa Oromoon saba kuushii dubbatu guddicha dha.
Business plan for non-profit organization pdf download
One minute manager.pdf download
Taskinis masazas pdf
Ensayo simce lenguaje segundo medio pdf download
Chandias computo y presupuesto pdf gratis
Mathematica introduction pdf
Hydrologie generale cours pdf